हस्तमैथुन गर्नुको यी ४ अति उपयोगी फाइदाहरु , यस्तो रहेको फाइदा (जान्नै पर्ने कुरा)
रबिना बादी रुदै भन्छिन् “मैले मेरो किड्नी बेचेको होईन इच्छाले दान दिएको हो ” [भिडियो हेर्नुहोस ]
प्रधानमन्त्री ओलीका उखान टुक्का भन्दापनी चोटिला १०१ उखान टुक्काहरु
बिहेका लागि आएका प्रेमीको विमान दुर्घटनामा मृत्यु, प्रेमिकाको कर्मले विश्वको आँखा रसायो
होशियार ! जमराको जुस औषधी होइन , कलेजोको रोगीको लागि त जमराको जुस विष नै हो :डा सुधांशु केसी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीन जना पक्राउ
हैट के जमाना आउँ थाल्यो भने यस्तो कलेज को ड्रेस मै पुरा भिडियो हेर्नु होला
किन पर्छ अनुहारको छाला चाउरी ? चाउरी पर्नबाट बच्न खानुहोस् यी खानेकुरा-शेयर गर्न नभुल्नुहोला
यो पढेपछि सायद तपाईंले दुधचिया पिउन आजै छोड्नुहुनेछ ! २ मिनेट समय निकालेर अवश्य हेर्नुहोला
Home/स्वास्थ्य जिवनशैली/हस्तमैथुन गर्नुको यी ४ अति उपयोगी फाइदाहरु , यस्तो रहेको फाइदा (जान्नै पर्ने कुरा)
काठमाडौ । हाम्रो समाजले राम्रो र नराम्रो कार्यलाइ छुट्याएको छ । किनकी यस्ता कुराहरु रहेका छन जुन समाजमा अपच रहेको छ । तर समाजमा खुलेलाम रुपमा नपच्ने तर गोप्य रुपमा पच्ने कुराहरु रहेका छन् ।जुन मानिसको आधारभूत आवश्यकता नै हो ।
आज हामी त्यही समाजले नपचाएको तर हाम्रो जिवनमा अति आवश्यक ठानिएको र तपाइले भन्न नसकेको कुरा गर्न गइरहेका छौ ।त्यो हस्तमैथुन रहेको छ । यो भनेको हातको माध्यमबाट खेलाएर वा विभिन्न प्रकारले यौन आनन्द लिने कार्य हो ।
तर यसको विषयमा धेरैलाइ थाहा छैन । कति यसको शिकार भइराखेका छन ।किनकी हस्तमैथुन गर्न हुने हो कि होइन भनेर यसैगरी कोही हस्तमैथुन गर्ने र पछि पछुताइरहेका हुन्छन । तर चिन्ता नलिनुहोस यो प्राकृतिक कुरा हो । यसलाइ तपाइले कुनै हिचकिचावट नै गर्न सक्नुहुन्छ । यसले ठिक उल्टो अर्थात हस्तमैथुन एक स्वस्थ यौन जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा हो भनेर विशेषज्ञहरु बताएका छन् । यसले पुरुष र महिला दुवैलाइ धेरै नै फाइदा गर्ने बताइएको छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार हस्तमैथुनका ४ फाइदाहरु यस्ता रहेका छन ।
पहिलो फाइदा महिलाहरुको लागी नै रहेको छ । महिनावारीसँग जोडिएको दुखाई हटाउनका लागि हस्तमैथुनले सहयोग गर्छ । हस्त मैथुन गर्दा निक्लने तरल पदार्थले दुखाइ कम गर्छ र राहत दिन्छ । हस्तमैथुनबाट निस्कने झोलिलो पदार्थले योनीमा हुने सुखापन हटाउँछ र दुखाइ कम गर्ने भएकाले फाइदा भएको फिनवर्ग स्कूल अफ मेडिसिनमा स्त्री तथा प्रसूती रोगका प्रोफेसर लारा स्ट्रीचर बताएकी छिन ।
त्यसैगरी दोस्रोमा मानिसहरुमा हस्तमैथुनले यौन जीवन बिग्रन्छ भन्ने बुझाइ छ । तर यो गलत मान्यता स्थापित भएको बताइएको छ । यो ठ्यक्कै उल्टो हुन्छ । हस्तमैथुनले मजबुद यौन सम्बन्ध बनाउन सहयोग पुगी फाइदा हुने हुन्छ । त्यस्तै हस्तमैथुन पछि निकै मिठो निन्द्रा लाग्छ । विशेषगरी पुरुषहरुका लागि निन्द्रा नलाग्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउनका लागि यो सबैभन्दा सुरक्षित र उपयोगी तरिका भएको फ्रेन्च इन्स्टीच्युट अफ हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्चको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । किनकि हस्तमैथुनपछि पुरुषमा यौन इच्छा पूरा हुन्छ र निन्द्रा लाग्ने समेत बताएका छन् ।
त्यसैगरी हस्तमैथुनले शारिरिक र मनौबैज्ञानिक स्तरमा आरम महशुस हुन्छ । हस्तमैथुनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र संक्रमण हुनबाट जोगाउँने सेक्सुअल एण्ड रिलेशनसीप थेरापीले जनाएको छ ।अनुसन्धानका अनुसार जुन मानिसमा आर्गेज्म धेरै हुन्छ उसलाई इम्युनोग्लोबिन ए को मात्रा धेरै हुने भएकाले यसबाट बचाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले यस कार्यले यौन जीवन बिग्रने होइन झन राम्रो हुने हुन्छ ।
ग्यास्ट्रिकको उपचार अब आफैँ गर्न सकिन्छ, यस्ता छन् उपचार विधि
छोटो समयमै ज्यान लिने एपेन्डिक्स कसरी हुन्छ ? लक्षण निम्न छन्, शेयर गरेर सबैलाई जानकारी दिनुहोला
पाचन यन्त्र सुधार्ने ६ प्राकृतिक काइदा, शरीरलाई गराउनेछ रोगमुक्त
के हेल्मेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?
हरिवंशले जे भने पनि हासो उठ्ने [भिडियो हेर्नुहोस ]
रुसी वैज्ञानिकले क्यान्सरको उपचार गर्न सक्ने फल पत्ता लगाए, जुन फल नेपालमा मात्रै पाइन्छ
२१ वर्षीया पवित्रा तीन वर्षीय छोरा सहित ४ दिन देखि बेपत्ता , परिवारमा रुवाबासी [भिडियो हेर्नुहोस ]
भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य पढ्नु होला ! जानकारी का लागि शेयर गर्नुहोस
दुई टन सुनका सिक्का जम्मा गर्नेलाई मृत्युदण्ड !